Suuqa kala Iibsiga Odayaasha Dhaqanka oo Muqdisho ka furmay iyo Lacago la isku falisaayo (Warbixin Xasaasi ah) - iftineducation.com
Suuqa kala Iibsiga Odayaasha Dhaqanka oo Muqdisho ka furmay iyo Lacago la isku falisaayo (Warbixin Xasaasi ah)
aadan21 / May 1, 2012
Suuqa Kala Iibsiga Odayaasha Dhaqanka
iftineducation.com – Waxaa Magaalada Muqdisho markaan si xowli ah uga socda xod xodashada iyo kala iibsiga Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed si loogu koro jaran jaro siyaasadeed ee hada dhisamheeda socoto.
Waxaa Muqdisho kasocda shukaansiga Odayaasha Dhaqanka kuwaa oo loogu tala galay Soo xulitaanka Baarlamaanka Cusub ee la filayo in Dowlada Soomaaliya yeelato tan markii ay meesha ka baxdo hadana la guda galayo soo xulida Odayasaaha iyana keenaya Baarlamaanka Cusub beelahoodsa matalaya.
Xitaa Muqdisho waxaa hada kasocda rag aan aheyn Odayaal dhaqmeedyo balse loo galiyay Macaawiis iyo Cimaamado Go’na Garabka loo saaray si looga dhigo Odayaal dhaqmeedyo matala qaar kamid ah Beelaha Soomaaliyeed laguna gaaro dano gaar ah.
Suuqa kala iibsiga Odayaasha ayaana si weyn hada u socda iyadoona lacago badan la isku falisayo kaa oo magaca odayaal dhaq meedyada lagu kala wareegayo waxaadna moodaa maalinbo meel Odayaasha lagu kulansado laguna balansado.
Xod Xodashada ayaa inta badan kasocota Xarunta Madaxtooyada taa ee wadaan Madxada sare ee Dowlada ee hamiga uu ugu jiro in Madaxweyne isku soo sharaxaan si ay Booskaasi u helaan iyagoona adeegsada dalaaliin hooseedyo.
Madaxda sare ee Dowlada ayaana hada wada qorsho ay isugu keenayaan Odayaal Dhaqmeed Maqaar saar ah iyo kuwa Jeebka lacag loogu shubay si ay usoo xulaan Xildhibaano beeshooda ka tirsan oo loo farmuuqayo si Codadkaasi hadhow loogu xisaabtamo.
Goobaha Fadhi Ku dirirka ayaa aad loo hadal hayay Odayaal Dhaqmeedyo Yurub iyo Mareykanka laga keenayo taas oo layaab keentay in Odayaashii Dalka joogay inta laga gudbo Odayaal kale oo magac loo habeeyay Muqdisho lagu soo uruursho.
Qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka ayaana ka digay in fashil ku yimaado hadii meesha la keeno Odayaal Dhaqmeed aan Rasmi aheyn balse Shaati been ah loo soo galiyay iyadoona sii kordheyso Cabashada Odayaasha rasmiga ah ee ka cabayanaya Odayaal ku sheeg la wad wado.
Sidoo kale Raga Siyaasiyiinta ah ee hamiga ugu jiro in Xildhibaanada Baarlamaanka Cusub kasoo muuqdaan ayaa iyana wada xod xodasho ay ugu jiraan sidii Kursiga Beeshooda u heli lahaayeen iyagoona Odayaasha u balan qaadaya lacago fara badan hadii Kursiga ku fariisitaan.
Dad badan ayaa qaba in Dowlada Cusub fashil noqon doonto hadii aan la keenin Meesha Xildhibaano cusub oo matali kara Shacabka Soomaaliyeed aana aqoon Musuq maasuq iyo fadlan Lacag ku shubo taa oo Dilootay Xildhibaanadii kala Duwaan ee soomaray Dowladihii ugu danbeeyay ee Dalka dadkuna aad u naceen.
Dad badan ayaa isha ku haya kana dhursugaya kala iibsiga Odayaasha iyo sida uu Xaalku ku danbeyn doono iyadoona hada Kala iibsiga Odayaasha uu marayo meel Xasaasi ah .
Naxtin iyo Qaracan Qof Nolosha lagu Aasayo isaga oo Nool Misana Ashahaadanaya ( Digniin ha Daawan Hadii aadan qaangaarin ama Awoodin )
Jamaaco muslimiin ah ayaa qorsheynaya iney uqeybiyaan kitaabka qur’aanka kariimka guri walbo ee ku yaala Germalka?